स्पेनका प्रशिक्षक पदमुक्त, यसो भन्छ स्पेनिस फुटबल संघ ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
स्पेनका प्रशिक्षक पदमुक्त, यसो भन्छ स्पेनिस फुटबल संघ ?
म्याड्रिड । रुस विश्वकपको प्रिक्वार्टर फाइलनमै रुससँग स्तब्ध भएर घर फर्किएको स्पेनले आफ्नो प्रशिक्षकलाई पदमुक्त गरेको छ । स्पेनले प्रशिक्षक फर्नान्डो हिएरोलाई पदमुक्त गरेको हो ।
सन् २०१० को विश्वकप विजेता स्पेन प्रिक्वार्टरफाइनलमा आयोजक रुससँग टाइब्रेकरमा पराजित भएको थियो ।
निर्धारित र अतिरिक्त समयमा १-१ गोलको बराबरीमा रोकिएको स्पेन टाइब्रेकरमा रुससँग ४-३ गोलले पराजित भएपछि स्पेनले यस्तो निर्णय लिएको हो । यद्यपि, स्पेनले प्रशिक्षक फर्नान्डोको भूमिकाको प्रशंसा गरेको छ । विश्वकपमा समूह ‘बी’ बाट मैदानमा उत्रिएको स्पेनले पहिलो खेल पोर्चुगलसँग ३-३ गोलको बराबरी खेल्यो भने दोस्रो खेलमा इरानलाई १-० गोलले पराजित गर्न सफल भयो । तर, तेस्रो खेलमा भने स्पेन मोरक्कोसँग १-१ गोलको बराबरीका रोकियो ।
समूह विजेता बन्दै नकआउट चरणमा प्रवेश गरे पनि टाइब्रेरमा रुससँग पराजित भयो । संघले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हिएरोले विश्वकपमा टोलीलाई राम्रो नेतृत्व गरे, त्यसका लागि उनी धन्यवादका पात्र हुन् । फर्नान्डो अब आफ्नो पुरानै काम फुटबल संघको निर्देशक पदकमा फर्किएका छन ।’
५० वर्षीय फर्नान्डोले अब फुटबल संघको निर्देशक पदमा भूमिका खेल्ने छन् । उनी यसअघि पनि यही जिम्मेवारीमा थिए । उनले रुस विश्वकपको दुई दिनअघि मात्र उक्त जिम्मेवारी पाएका थिए । स्पेनले रियल म्याड्रिडसँग आफूखुसी सम्झौता गरेको भन्दै मुख्य प्रशिक्षक जुलेन लोपेटेग्वीलाई बर्खास्त गर्दै फर्नान्डोलाई उक्त जिम्मेवारी दिएको थियो ।